Kedu ihe bụ okirikiri glacial na gịnị bụ njirimara ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị si mara, glaciers Ha buru ibu, buru oke ibu ma buru oke otutu akpụrụ akpụ nke na-etolite elu ụwa site na nchịkọta, mkpokọta na crystallization nke snow mgbe ọtụtụ afọ nke ọdịda. Taa, anyị ga-ekwu maka akụkụ na-adọrọ mmasị nke glaciers. Ọ gbasara circus glacier. Ihe dị mkpa glaciers na-abawanye bara uru na ọnọdụ mgbanwe ihu igwe anyị hụrụ onwe anyị.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe ihe egwuregwu ikuku nwere na mkpa ọ dị.
1 Ihe omimi nke glasia
2 Kedu ihe bụ circus glacial
3 Njirimara nke glacier cirque
Ihe omimi nke glasia
Iji ghọta ihe ihe ndị a na-eme na glaque, anyị ga-ebu ụzọ mara otú mmiri ahụ na-esi kpụkọọ. Mgbe oke mmiri na-amịkọrọ oge ọkọchị gafere site na snow snow a na-eme kwa afọ ihe ahụ na-amalite ịgbaze. Ka glacier nwee ike ịdị, etu mmiri ga-adị n’elu ụwa ga - adị mma karịa etu mmiri agbaze agbaze ma ọ bụ gbapụ n’anwụ.
Enwere otutu glaciers n ’ụwa nile. N'etiti ụdị glacier ọ bụla, ụdị dị iche iche nwere ike ịdị iche. Ọmụmaatụ, Enwere glaciers nwere udiri ndagwurugwu, niche, ubi ice, wdg. Ọnọdụ ihu igwe anyị hụrụ na-ekpebikwa ihe ndị a ga-eme ma a bịa n’ịhụ ọdịdị nke ice. Ọnọdụ ndị a nwere ike ịbụ ebe okpomọkụ, ọkụ, ma ọ bụ polar. Ọnọdụ okpomọkụ na-emetụta ọnụọgụ nke snow nke na-agbakọ ma ọ bụ gbazee. Dabere na nkezi okpomọkụ anyị na-ahụ na mpaghara ice, anyị nwere ike ịnwekwu nchịkọta snow na mkpakọ karịa karịa ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe karịa.
Ugbu a, 10% nke elu ụwa anyị kpuchiri glaciers. Na ala ochie oge ochie ya kpuchie ya 30%. Enwere ike ịsị na ọ bụ ọdịdị mbara ala na-agbakọta oke mmiri dị mma n'ụwa. N'ihi ya ihe egwu nke arụmọrụ ya na-eru nso ma ọ bụ, ya mere, ịrị elu na oke osimiri.
84% nke mpaghara glaciers niile dị na Antarctica, ebe ndị ọzọ kewara Greenland na mpaghara ndị ọzọ oyi kpọnwụrụ nke ụwa.
Kedu ihe bụ circus glacial
Ugbu a anyị echetala etu etu mmiri kpụkọrọ akpụkọ si arụ ọrụ, anyị nwere ike banye na mbara igwe ahụ kpụkọrọ akpụkọ. A circus circus a circus glacier bụ ụdị okwute okwute nwere ọdịdị semicircular Ihe kpatara ya bụ ịmịgharị ma ọ bụ ịmịkọrọ ma ọ bụ akpụrụ mmiri mgbe niile ma ọ bụ na nchịkọta ya ma ọ bụ ebe nri ya. Mpaghara glacier na-akpakọba bụ akụkụ ebe ọnụọgụ snow nke echekwara dị ukwuu karịa nke na-agbaze. N'aka nke ọzọ, anyị nwere mpaghara abrasion ebe ọnụ ọgụgụ mgbaze dị elu karịa ọnụọgụ nchịkọta.
Igwe a na-agba gburugburu na-adịkarị ka amphitheater ma ọ bụ oche nwere akụkụ ndị ọzọ akpọpụtara ma ọ bụ nwere okirikiri kwụ ọtọ nke gbara ya gburugburu. Cirque glacial na-enwekarị akụkụ abụọ nwere ike ịdị iche. Anyị nwere akụkụ nke kewara mgbape a na-akpọ rimaya nke na-agagharị ma ọ bụ kwụ: ebe a anyi huru akụkụ ala, nke bu ebe otutu snow na ice na-achikota. Akụkụ nke dị elu, n'aka nke ọzọ, nwere mkpọda buru ibu buru ibu karị ma akpụrụkọ akpụrụ akpụ karịa n'ihi okpomọkụ dị ala.
Anyị nwekwara ike ịchọta mpaghara nkwụsịtụ na mbara igwe na-agba agba. Mpaghara a bụ ebe usoro agbaze, nhazi na mwepu nke igwe ice na-eme mgbe ị banyere n'oké osimiri.
Njirimara nke glacier cirque
Agbanyeghi na enwere otutu ndi mmadu di iche-iche di iche-iche, a na-amata ha niile site n'inwe ihe omuma nke na enyere anyi aka ichota ndi nke ebe a na-anabata mmiri. N'etiti njirimara bụ isi anyị nwere mgbidi ya dị elu. Ha dị n'elu bergschrund nke glacier ochie. Mgbidi glacier a amachaghị ma ọ bụ bibie mgbidi ndị a. Ndagwurugwu ya dị larịị ma elu ya adịghị agbanwe agbanwe n'ihi ọdịda nke akpụrụ mmiri ndị na-arapara n'oké nkume.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ala nke mbara igwe glacial. Ọ nwere mkpọda dị ala karịa nke mgbidi ahụ nwere. N’ebe a, anyị nwere ike ịhụ nkume apịtị dị iche iche nke ikuku igwe mebiri. Mgbe ụfọdụ, anyị nwekwara ike ịchọta ụdọ moraine nke kwekọrọ na ntụziaka nke mkpọda. Ala nke circus nwere ike ịbụ nke efere ma ọ bụ nke kwụ ọtọ. Ọzọkwa, Dabere na ụdị ha, ha nwere ike nwee otu ọdọ mmiri ma ọ bụ karịa.
N’ebe a na-eme egwuregwu dị ka egwuregwu amphitheater, ngalaba obe nwere nke nwere udi U. N’okpuru ọnụ ala circus nke circus anyị nwere ike ịhụ etu esi emesi mkpọda a ike na-egosi mmalite nke ndagwurugwu glacial.
Athough ọ dịghị ka, beri dị ezigbo mkpa na glaque cirque. Ọ bụ mgbape na-ahụ anya nke na-etolite na ice na akụkụ nke mbara igwe glacial. Nke a mgbape bụ maka nkewa nke ice guzogidere na-mmasị na nkume nke ugwu site na-akpụ akpụ ice nke glasia onwe ya.
Bergschrund na-emeghe ma na-ekpughe nkume ahụ dị elu na mmalite oge ọkọchị. Nke a bụ n'ihi oke okpomọkụ na mmalite nke agbaze nke ice. Okwute ahụ na-ekpughere oge mgbanwe ehihie na abalị na ọnọdụ okpomọkụ. Ugboro a nke oyi na thawing, n'okpuru ihe ntu oyi, na-eme ka nkume jiri nwayọọ nwayọọ na-agbawa ma mee ka nkume dị elu daa. Nke a bụ otú okwute si were ọdịdị na-apụtacha iche.
Mgbanwe ndị a na-eme ka ikuku kpoo na-emebi ọgba aghara. Akụkụ gbazee na-arịwanye elu karịa oke mmiri ozuzo n'ụdị snow nke nwere ike ịnakọta ịkọwa glacier.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere circus glacial.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Circus glacier